C/raxmaan Odawaa” Farmaajo inuu Guddoomiye Gobol iga dhigo ma rabo,” | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA C/raxmaan Odawaa” Farmaajo inuu Guddoomiye Gobol iga dhigo ma rabo,”
C/raxmaan Odawaa” Farmaajo inuu Guddoomiye Gobol iga dhigo ma rabo,”
Musharaxa madaxweynaha Galmudug C/raxmaan Odawaa goob fagaaro ah ka sheegay inuusan rabin in madaxweyne Farmaajo uu ka dhigo Guddoomiye Gobol,taasi badalkeedana uu codkooda weydiisanayo Shacabka Galmudug.
Wasiirkii hore ee arrimaha gudaha Soomaaliya hadana ah Xildhibaan ka tirsan Baarlamanaka Soomaaliya ayaa sheegay in wada shaqeynta ka dhaxeyso Dowladda Federaalka iyo maamul Goboleedyada dastuurka dalka uu dhigayo,islamarkaana aysan jirin cid keligeed meel istaagi karta.
” Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada sida ay u wada shaqeynayaan dastuurkaa sheegay,cid cid u baahan malahan,wada shaqeynta jaceyl iyo naceyn midna ma ahin, waaarrin dastuuri ah qofkii arrintaasi ku xadgudubtaa ku garan daran,” ayuu yiri C/raxmaan Odawaa.
Sidoo kale, Musharax madaxweynaha Galmudug C/raxmaan Odawaa ayaa sheegay in maalmahan dhegahiisa ku badateen Dowladda Federaalka ku ma rabto iyo arrimo kale.
” Aniga iney i magacowdo maba rabo Dowladda Federaalka,maxay tahay sababta haddii Dowladda Federaalka aan cod ka rabo boorkan u dhegsaday,” ayuu shacabkii kala qeyn galay barnaamijkiisa ka dhacayay magaalada Muqdisho ku qanciyay.
Hardan adag oo u dhaxeeya musharaxiinta Galmudug oo qaarkood gadaal laga kala riixayo ayaa ka taagan Galmudug halkaasi oo lagu wado iney ka dhacdo doorashada madaxtinimada maamulkaasi.
Dowladda Federaalka ayaa loolan adag ugu jirta dhaqaalo fara badan ku bixineysa sidii ay u soo saari lahayd musharax iyagu taageersan oo fala rabitaankooda.